1. Hichapụ akaụntụ email iPad
2. Hichapụ iCloud akaụntụ iPad
3. Hichapụ iPad akaụntụ na-enweghị paswọọdụ
Hichapụ akaụntụ email iPad
Nke mbụ niile, gbanye gị iPad na isi na 'Ntọala' akara ngosi.
Ugbu a, hover n'elu ka 'Mail, kọntaktị na kalịnda' nhọrọ.
On n'aka nri n'akụkụ, ị ga-ahụ ndepụta nke dị iche iche akaụntụ email na e kegide gị iPad.
Họrọ akaụntụ na ị chọrọ ka ihichapụ ma pịa 'Nhichapụ' button.
Ị ga-enweta a ozugbo arịọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ akaụntụ.
Gosi gị ihe site na ịpị 'Nhichapụ' ọzọ.
Cheta, ihichapụ akaụntụ email ga-ihichapụ ozi gị iPad na e wee kegide ha akaụntụ gị.
Hichapụ iCloud akaụntụ iPad
Ịkwaga 'Ntọala' na gị iPad.
N'okpuru 'Ntọala', hover ka 'iCloud' na pịa ya.
Head ka nnọọ ala na ị ga-ahụ otu nhọrọ akpọ 'pụọ'. Pịa na na.
Mgbe ị na-enweta na 'pụọ', ị ga-na-anya ozi, na-akwadokwa gị edinam. Pịa 'pụọ' ọzọ.
Ugbu a, ị ga-ịnọ ọzọ anya ozi maka nhichapụ nke akaụntụ, ị ga-jụrụ dị ka ihe a ga-eme ka iCloud safari data na Ndi ana-akpo.
Ị nwere ike ma na-ahọrọ na-edebe ha gị iPad ma ọ bụ ihichapụ ha dabeere na n'elu mmasị gị.
Gị mkpa iji tinye gị iCloud paswọọdụ wee na i nwere ike gbanyụọ 'Chọta My Ngwaọrụ'.
Chere ruo oge ụfọdụ ma mgbe ahụ, gị iPad akaụntụ ga-aga nke ọma ehichapụ gị iPad.
Hichapụ iPad akaụntụ na-enweghị paswọọdụ
Lee ndị isi atụmatụ Wondershare SafeEraser awade.
Ọ na-enyere na-adịgide adịgide ihichapụ data nke pụtara na ọ na-enye enwekwukwa nche etoju.
Ya-enye gị ka kpamkpam ihichapu ngwaọrụ gị.
Ọ na-akwado ọtụtụ nke dị iche iche faịlụ formats dị ka ọ bụghị nanị okosobo foto na vidiyo ma nwekwara ike ihichapụ oku na ndekọ, ozi, ibe edokọbara, Gburu na ndị ọzọ.
Ọ na-enyere na gwakwara elu ohere na gị iPhone na iPad na ọsọ yo gị na ngwaọrụ.
Download Wondershare SafeEraser ngwá ọrụ na gị na PC na ẹkedori ya.
Ugbu a, jikọọ gị iPad gị na kọmputa na iji eriri USB.
Ozugbo iPad jikọọ, ị ga-ya na aka-ekpe-n'akụkụ nke Nchekwa nchicha ngwá ọrụ.
Tupu ị n'ihu na nzọụkwụ, ị chọrọ ịga gị iPad ígwé ojii na ego ma ma ọ bụ gị 'Chọta My iPad' na-nyeere. Ọ bụrụ na ọ agbanwuru ha, na mkpa ka ị gbanyụọ ya.
Na mmemme, pịa na nhọrọ, 'ihichapu niile Data'.
Ị ga-ahụ a ọhụrụ window ebe mkpa ka ị pịnyere 'Nhichapụ' na ozugbo igbe n'ịkwado nzọụkwụ.
Chere ruo oge ụfọdụ ruo mgbe nhichapụ zuru ezu.
Ị ga-ahụ a ozugbo na-ekwu na nhichapụ e dechara.
Na-adịgide adịgide Ihichapu iPad Data tupu ere
> Resource> iPad> Nchekwa na Mfe Method iji Hichapụ iPad Akaụntụ.